मुडी अभिनेता - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
झन्डै चार वर्षअघिको कुरा हो, बुटवलको खस्यौली एफएममा एउटा रात्रिकालीन कार्यक्रम प्रसारण हुन्थ्यो । एफएमले बिहानैदेखि ‘अभिनेता आर्यन सिग्देलसँग रमाइलो गफगाफ हुँदैछ, तपाईं पनि कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ’ भन्ने प्रचार सामग्री प्रसारण गरिरहेको थियो । आर्यनलाई पूर्वजानकारी गराएर नै उक्त कार्यक्रम प्रसारण हुन लागेको थियो । कार्यक्रम प्रारम्भ हुनुभन्दा केही घण्टाअघि पनि रेडियो जक्कीले आर्यनसँग सम्पर्क गरेर कार्यक्रमका लागि तयार हुन आग्रह गरिसकेका थिए । राति ९ बजेदेखि कार्यक्रम प्रसारण हुने तयारी भैरहेका बेला करिब ८:५० बजे आर्यनसँग पुन: एकपटक सम्पर्क भयो । त्यसअघि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने बताइरहेका आर्यनले कार्यक्रम प्रारम्भ हुनुभन्दा १० मिनेटअघि मात्र— भोलि कोरिया जाने दिन रहेछ, निकै व्यस्त भइयो, सरी भन्दै फोन काटे । अब भएन फसाद ?
ती आरजेले तुरुन्तै स्टेसन म्यानेजरलाई फोन गरेर सबै कुरा बताएपछि कार्यक्रम अर्कै हिसाबले प्रसारण भयो । कार्यक्रममा फोन गर्ने श्रोताले धेरै गुनासो गरे तर टेलिफोनमा आएको गडबडीका कारण अभिनेता आर्यन सिग्देलसँग सम्पर्क हुन नसकेको भनेर माफी मागियो ।
वास्तवमा अभिनेता आर्यन सिग्देल बिन्दास स्वभावका अभिनेता हुन् । सोझै भन्नुपर्दा उनी मनमौजी स्वभावका छन् । उनलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छन्, जहाँ जान मन लाग्छ त्यहीँ जान्छन्, जे खान मन लाग्छ त्यही खान्छन् । ‘खुरु–खुरु आफ्नो काम गर्‍यो, त्यसपछि आफ्नो प्राइभेट लाइफ’ उनले भन्ने वाक्य यही हो ।
केही समयअघि साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्तामा एकलकाँटे जीवनका बारेमा आर्यनले भनेका थिए– ‘जिन्दगी आफ्नै हिसाबले चलाउने हो नि †’ बुटवलको एफएमसँग आर्यनले जसरी व्यवहार गरे, त्यस्तो व्यवहार अन्य ठाउँमा पनि गरेको गुनासा त्यसअघि पनि नआएका होइनन्, तर उनी सामान्य तर्क गरेर पन्छिने प्रयास गर्छन् ।
अर्को रमाइलो प्रसंग पनि छ । अभिनेत्री रेखा थापासँग सामान्य मनमुटावकै कारण झन्डै सात वर्ष आर्यन र रेखाको बोलचाल नै भएन । जबकि आर्यनले अभिनेत्री थापाकै चलचित्र किस्मतबाट डेब्यु गरेका थिए । रेखाकै कारण यो क्षेत्रमा आएका नाताले पनि उनले इगो नलिएको भए के हुन्थ्यो ? उनले त्यो पनि सोचेनन् । अन्त्यमा रेखाले नै आर्यनसँगको रिसइबीको अन्त्य गरिन् ।
अधिकांश लभस्टोरी चलचित्रमा देखिने आर्यनको व्यक्तिगत स्वभाव भने अचम्मको छ । थानकोटमा आफ्नै घर भए पनि उनी काठमाडौं सहरको मध्यभागमा फ्ल्याट लिएर बसेका छन् । अर्काको चलचित्रमा काम गरेर सफलता हात पारेका आर्यनले दुई वर्षअघि आफ्नो ब्यानरभन्दा बाहिरको चलचित्रमा काम नगर्ने उद्घोष गरे । किन ? उनले कारण त खुलाएनन्, तर अरू ब्यानरमा काम नै नगर्ने ढिपी कसे । सोही कारण रेखा थापाले निर्माण गरेको चलचित्र रुद्रप्रियामा समेत उनले आफ्नो ब्यानरको नाम जोडेर मात्र काम गरे । पछिल्ल्लोपटक आर्यनले फेरि अर्को बाहिरी व्यानरको चलचित्रमा साइन गरेका छन् । उनले नाई नभन्नू ल सिरिजका निर्माता तथा निर्देशक विकाशराज आचार्यले निर्माण गर्न लागेको नयाँ चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’ को मुख्य भुमिकाका लागि १३ लाख पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने पक्का गरेका छन् । यो चलचित्र चाँडै छायाँकन हुँदैछ ।
आर्यनले आफ्नो जिद्दी स्वभावका कारण धेरै राम्रा ब्यानरका चलचित्र फुत्किएका छन् भने तिनै चलचित्रबाट इन्ट्रि मारेर कतिपयले ठुलै नाम र दामसमेत कमाएका छन् । अब कुरा गरौं, केही महिनाअघिको । उनले आफै निर्माण गरेको चलचित्र कायरा प्रदर्शनको मुखमा अझ अचम्मको काम गरे । आफ्नो फेसबुकमा भएका ५ हजार साथीलाई एकैपटक अनफ्रेन्ड गरेर चलचित्र प्रदर्शनका बेला आर्यनले विभिन्न टीका–टिप्पणीलाई आफैंंले निम्तो दिए । अन्तत: उनले फेरि आफ्नो फेसबुकमा साथीहरू थप्दै गए । फेरि अर्को कुरा पनि थपिहालौ न † केही महिना अघिसम्म उनको नम्बरमा सेभ भएका फोनबाट कल गर्दा मात्रै फोन उठ्थ्यो, अरु नम्वरबाट कल गर्दा नेटवर्क लाग्दैन थियो । यस्तो हुँदा धेरै महत्वपुर्ण कामका लागि पनि कसको नम्बर सेभ छ भन्दै साथी खोज्नुपथ्र्यो धेरैलाई । यो नजिकैका साथीहरुले पनि धेरै गुनासो गरेपछि उनले आफ्नो फोनमा जसले कल गर्दा पनि सहजै लाग्ने बनाए । नजिकका साथी होस् या टाढाको † कुरो मिल्यो भने घण्टौं गफिदिइन्छन्, मन मिलेन हातसमेत नमिलाएर छुट्टिन्छन्, उनी ।
यस्ता कुरा गरिसाध्य छैन, आर्यनको । व्यक्तिगत जीवनमा आर्यनले जे गरुन्, तर एउटा कलाकारका रूपमा सामान्य त्रुटि पनि गसिब बन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरिदिए हुन्थ्यो ।